Sirdoonka Soomaaliya oo sheegay inuu is casilay madixii Amniyaatka Shabaab ee Muqdisho. | XAL DOON
Home NEWS Sirdoonka Soomaaliya oo sheegay inuu is casilay madixii Amniyaatka Shabaab ee Muqdisho.
Sirdoonka Soomaaliya oo sheegay inuu is casilay madixii Amniyaatka Shabaab ee Muqdisho.
Hay’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa shaacisay inuu xilkii iska casilay madixii Amniyaatka Shabaab ee Gobolka Banaadir, Muuse Macalin oo ku magac dheeraa (Mucaawiye).
Qoraalka ka soo baxay hay’ada NISA ayaa lagu sheegay in sababta is casilaadiisa ay salka ku heyso Khilaafkii u dhaxeeyey labada garab ee Kooxda Alshabab ee u kala jabay Mahad Karataay iyo Abuu Cubeyda.
“Khilaafkii u dhaxeeyey labada garab ee Maafiyada Alshabab ayaa sababay inuu is casilo madaxii Amniyaatka Gobolka Banaadir, Muuse Macalin (Mucaawiye) oo ” 39, jir ah” oo ahaa garabka raacsan horjooge Mahad Karataay” ayaa lagu yiri qoraalka NISA ee lagu daabacay Twitterkooda.
Majirto ilo ka madax banaan NISA oo xaqiijin kara sheegashadooda, iyadoo Shabaab aaney wali wax war ah ka soo saarin warka ka soo yeeray Sirdoonka Soomaaliya ee uu Hoggaamiyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.